“बेलायतको जस्तै राजतन्त्र ल्याउन सरकार लागिबक्सेको छ” – Sourya Online
“बेलायतको जस्तै राजतन्त्र ल्याउन सरकार लागिबक्सेको छ”
सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १४ गते २:२० मा प्रकाशित
काठमाडौं, १३ चैत । आगामी १४ जेठमा नया संविधान जारी हुने सम्भावना क्षीण हुदै गएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ०४७ सालको संविधान ब्युताउने माहोल बनाउन कसरत थालेका छन् । उनले बेलायतको जस्तै संवैधानिक राजतन्त्र नेपालमा पुनस्र्थापित गर्ने महत्वकांक्षा राखेको एक राजावादी नेताले सौर्यसग खुलासा गरे ।
विशेषगरीआफ्नो अघिल्लो भारत भ्रमणपछि पूर्वराजामा राजतन्त्र फर्काउन सकिने महत्वकांक्षा जागेको हो । राजपरिषद् स्थायी समितिका पूर्वसभापति डा. केशरजंग रायमाझीका अनुसार भारत भ्रमणका क्रममा शाहले भारतीय वरिष्ठ नेताहरूसग ०४७ को संविधान ब्युताउन सकिने विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
‘०४७ सालको संविधानलाई सबैले मानेर संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको अपरिवर्तनीय प्रावधानमा जानुपर्छ भन्ने ज्ञानेन्द्र सरकारको भित्री चाहना मैले बुझेको छु,’ रायमाझीले सौर्यसग भने, ‘अराजकता र अस्थिरताबाट मुलुकलाई जोगाउन बेलायतमा जस्तै संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा सरकार लागिबक्सेको छ ।’ आफ्नो एकमहिने भारत भ्रमणमा पूर्वराजाले कांग्रेस आई नेत्री सोनिया गान्धीसहित त्यहाको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसग भेट गरेको र भ्रमण सकारात्मक रहेको पनि रायमाझीले बताए ।
भारतकै चाहनामा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दाबी गर्दै रायमाझीले बदलिदो परिवेशमा ०४७ सालको संविधान ब्युताउन भारत सकारात्मक हुन सक्ने पनि अनुमान गरे । ‘राजाले भारतमा सोनियासग कुराकानी गरिबक्स्यो,’ रायमाझीले आश्वस्त हुदै भने, ‘राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बनाएर बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको प्रावधान आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यहा पनि भयो ।’
रायमाझीले ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि माओवादीको उच्च नेतृत्वले उनीसग संवाद गरी संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रमा सहमति गर्न आफूसग कुरा गरेको खुलासा गरे । ‘माओवादीले पहिले पनि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा सहमति जनाएर राजासग कुरा टुंग्याउन खोजेको थियो । वीरेन्द्र सरकार छदै पुष्पकमल दाहालजीले भेट्न खोज्नुभएको थियो । मैले समय मिलाइदिन्छु पनि भनेको थिए,’ रायमाझीले भने, ‘दरबारमा भएको घटना (हत्याकाण्ड)पछि त्यो सम्भव भएन । त्यसपछि ज्ञानेन्द्र सरकारसग पनि कुरा गर्न चाहेको थियो, माओवादीले । तर, ज्ञानेन्द्र सरकारले भेट्न मानिबक्सेन ।’
रायमाझीले प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई अपरिवर्तनीय रूपमा आत्मसात् गरिएको र विश्वले प्रजातान्त्रिक संविधानका रूपमा मान्यता दिएकाले त्यही संविधानलाई मानेर सबै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
रायमाझीसितको संक्षिप्त कुराकानी
पूर्वराजाले तपाईंसगको भेटमा के कुरा गर्नुभएको छ ?
राजाको विचार मैले बुझेको छु । ०४७ सालको संविधानलाई सबैले मान्नुपर्छ र मुलुकमा बढेको अराजकता अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको भित्री चाहना छ । संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायालय रहने व्यवस्था त्यो संविधानमा छ ।
अहिले पनि मुलुकमा हत्या, हिंसा र अराजकता कायमै छ । अराजकताबाट मुलुकलाई जोगाउन बेलायतमा पनि पछि राजतन्त्रको स्थापना भएको थियो । यहा त्यस्तै गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । त्यसका लागि ०४७ सालको संविधान नै चाहिन्छ भन्ने राजाको मनमा छ । इन्डिया भ्रमण पनि सकेर आइबक्सेको छ । त्यहा सोनिया गान्धीलगायत नेतासग पनि कुरा भएको छ ।
सोनियाले पनि नेपालमा ०४७ सालकै संविधान ब्युताउनुपर्छ भनेकी छन् रे नि राजासग हो ?
अ भारत नेपालमा राजतन्त्र चाहदैनथ्यो । तर, अस्ति राजा दुई दिन बसेर सोनियासग कुरा गरेर आइबक्सियो । माओवादीले पहिले पनि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा सहमति जनाएको र राजासग कुरा गरेर टुंग्याउन खोजेको थियो । वीरेन्द्र सरकार छदै पुष्पकमल दाहालजीले भेट्न खोज्नुभएको थियो । मैले समय मिलाइदिन्छु पनि भनेको थिए । तर, दरबारमा भएको घटनापछि सम्भव भएन, त्यसपछि ज्ञानेन्द्र सरकारसग पनि कुरा गरेर टुंग्याउने कुरा माओवादीले गरेको थियो ।
तर, ज्ञानेन्द्र सरकारले भेट्न मानिबक्सेको थिएन । मैले त्यतिवेलै माओवादीलाई संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय व्यवस्थासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रमा कुरा मिलाऊ, चुनाव गरौ, तपाईंहरू चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री हुनुस् भनेको थिए । त्यसवेला ज्ञानेन्द्र सरकारले अहिले नगरौ भनिबक्सेको थियो । अहिले भारत गएपछि कुरा भयो भन्ने मैले थाहा पाएको छु ।
पूर्वपञ्चहरूसित पूर्वराजाको छलफल
काठमाडौं, १३ चैत । एक महिनाभन्दा लामो भारत बसाइपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ०४७ सालको संविधान ब्युताउने आफ्नो चाहना विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गर्न थालेका छन् । यस विषयमा उनले राजावादीनिकट केही नेतासग छलफलसमेत गरिसकेका छन् ।
भारतबाट फर्किएलगत्तै शाहले राप्रपा, राप्रपा नेपाल र जनशक्तिका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, कमल थापा र सूर्यबहादुर थापासग भेटघाट गरेका थिए । यसैगरी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राजेश्वर देवकोटालाई पनि उनले भेटे । भेटघाटमा ०४७ सालको संविधान ब्युताउने विषयमा कुराकानी भएको स्रोतले बतायो । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले आगामी १४ जेठमा संविधान बनेन भने विभिन्न विकल्पमध्ये ०४७ सालको संविधान पनि एउटा विकल्प हुन सक्ने धारणा राखेका थिए ।
जनशक्ति अध्यक्ष थापाले भने अब त्यो स्थिति नरहेको जवाफ दिएको स्रोतले बतायो । पूर्वराजासग भेटघाट भएको केही दिनपछि आफ्नो जन्मोत्सवको अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा उनले नेपालमा अब राजतन्त्र ब्यतन नसक्ने बताएका थिए ।
पूर्वराजाकै चाहनाअनुसार उनी भारतबाट फर्किएको केही दिनपछि पूर्वपञ्चका पार्टी राप्रपा, राप्रपा नेपाल र जनशक्तिबीच एकताको प्रयास सुरु भएको थियो । तर, जनशक्ति र राप्रपाले राजतन्त्रलाई अस्वीकार गरेपछि एकीकरण भाडिएको छ । स्रोतको दाबी छ, ‘तीन पार्टीबीच एकीकरण गर्न पूर्वराजा निकै इच्छुक थिए । तर, उनको चाहना पूरा हुने स्थिति भने रहेन ।’
धनगढीमा भव्य तयारी
पूर्वराजा यही १६ चैतमा सुदूरपश्चिमको धनगढीमा जादै छन् । त्यहा उनी पाच दिन बस्ने कार्यक्रम छ । धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सुदूरपश्चिम जान लागे पनि उनको भित्री उद्देश्य भने राजनीतिक रहेको स्रोतले दाबी गर्‍यो ।
पूर्वराजा जाने कार्यक्रममा भिड जुटाउन राजावादीले ठूलै तयारी गरेका छन् । तयारीका लागि सुरक्षाकर्मीसहित २० जनाको एउटा टोली सोमबार बिहान काठमाडौंबाट धनगढी गएको छ । पूर्वराजाका स्वकीय सचिव सागर तिमिल्सिना मंगलबार त्यहा जादै छन् । नेपालगन्जमा रहेका राजावादी धनगढी जाने क्रम सुरु भएको छ ।
केही दिनअघि सुनसरीको झुम्कामा भएको कार्यक्रम सफल भएपछि उत्साहित बनेका पूर्वराजाले त्यही सफलता दोहोर्‍याउन सुदूरपश्चिम रोजेका हुन् । ‘झुम्कामा जसरी मान्छेहरू आए यसबाट सरकार निकै खुसी होइबक्नुभयो र सुदूरपश्चिम जान रुचि राखिबक्स्यो,’ पूर्वराजाका एक सहयोगीले भने ।